Nzọụkwụ 7 iji dozie ọkwá dị na IT Dezie Lee
New #IT nkà achọrọ maka ịmekọrịta na ịmepụta mmepe ohuru, dịka ọmụmaatụ, nhazi nlekọta nchịkwa, nchịkwa, nchịkwa nchịkwa bara uru, na ihe ndị ọzọ. Ajụjụ bụ, "Ọ bụ gịNdị nnọchianya Z nke ọma kwadebere ma nwee nkà iji na-ejide onwe ya na-akwado nkwado, mmejuputa iwu, oriri, na nchịkwa nke nwelite ọganihu? "
Izigharị usoro nkà nke IT abụghị ihe arụmụka n'eziokwu n'agbanyeghị na ọ na-ewe ọrụ, nhazi na akụnụba. N'ikpeazụ, ọ ga-enye aka na nlọghachi azụmaahịa na ego (ROI) maka azụmahịa. Ị nwere ike iche banyere nke a dị ka ihe yiri ụgwọ ndị metụtara ya na ịmepụta ihe ọhụrụ. Inweghi ihe omuma na-emecha mechaa gbasaa ọnụ ego zuru ezu nke ihe onwunwe (TCO), ikekwe ojiji ojiji (OPEX) ma belata ntinye ntaneti (NPV).
N'ikpeazụ ka m na-eche banyere itinye aka na ọrụ na òtù IT dị iche iche iji zipu atụmatụ nkà na ụzụ IT, esonyere m usoro ahụ n'ime ụzọ isi asaa ma ọ bụ nkeji. Ihe dị oke mkpa iji cheta bụ nke a bụ usoro nchọpụta, nke pụtara na ihe ahụ anaghị agwụ na nzọụkwụ nke asaa. Mgbanwe na-agbanwe agbanwe n'ime ụlọ na-enweghị ike ịgbanahụ. N'ụzọ dị otú a, nzukọ ahụ kwesiri ịtụgharị uche ugboro ugboro n'otú usoro IT si arụ ọrụ na-agbanwe agbanwe maka nduzi dị mkpa nke azụmahịa ahụ. A na-ekwu okwu nke ọ bụla n'ime usoro asaa ahụ n'ụzọ dị ịrịba ama n'okpuru.
Usoro nke asaa
Nzọụkwụ 1: Kpebie ntụziaka dị mkpa nke nzukọ ahụ.
Nzọụkwụ 2: Ghọta na ọ dị mkpa inwe ezigbo nkà.
Nzọụkwụ 3: Mee nraranye iji mara ụdị nkà a chọrọ.
Nzọụkwụ 4: Chọpụta nkà ndị a chọrọ.
Nzọụkwụ 5: Chọpụta nkwadebe nkwadebe.
Nzọụkwụ 6: Ụdị ihe ejiji nkà.
Nzọụkwụ 7: Nọgide na-enwe nkà dị mkpa.
Nke kachasị mkpa, ikpebi isi ntụziaka nke nzukọ bụ otu ihe dị mkpa nke ngbanwe azụmahịa. Kedu ihe ga-eme n'ọdịnihu azụmahịa yiri? Ihe nkà IT achọrọ iji nyere aka n'achụmnta ego ahụ ọ ga-eme n'ọdịnihu? Kedu ihe ndị mmekọ azụmahịa na-atụ anya n'aka nzukọ IT? Ọ na-adịkarị n'ìgwè maka echiche na atụmanya nke oghere pụrụ iche na ndị ọrụ nke IT. Nzọụkwụ mbụ bụ banyere ịchọta ihe doro anya gbasara ụzọ isi ahịa.
Enwere nkwenye nke inwe ezi nkà site na ịkwọ ụgbọala ROI nke azụmahịa ahụ, na-akwado ndị mmekọ ma na-enye ọrụ IT aka iji kwalite nduzi dị mkpa nke azụmahịa ahụ. Inwe ezi nkà na oge zuru oke na-etinye usoro IT na ebe ha ga-anakwere, na-eche echiche na ịnọgide na-enwe ike ọhụrụ maka mgbanwe azụmahịa. Inwe ezi nkà bụ ihe dị iche na nzụlite IT. Igha ezumike nkà IT na-achọ ndị ọkachamara IT ka ha nwee mkparịta ụka na-aga n'ihu na nkeji nke iche iche, ghọta ihe mgbaru ọsọ na usoro azụmahịa ma mara onye isi ahịa ha na atụmanya ha. Dị ka ihe atụ, nkà dị nro, ọmụmaatụ, nkwurịta okwu, mkparịta ụka, nchịkọ onye ọhụụ, ịgbatị ochichi, na nlekọta mmekọrịta ndị ahịa, na-eji nwayọọ nwayọọ achọpụta nke ọma.
Mgbe na-eziga Ngwá ọrụ nkà na ụzụ IT, nraranye ime ihe di otua kwesiri idi n'ogo nile nke ndi otu site na ndi nkwado na ndi mmeri nke ihe kpatara ya na ndi mmadu ga-achoro ime ihe. Ihe dị mkpa icheta bụ iziga otu Nhazi usoro nkà bụ usoro nhazi nke ọrụ na ọkachamara, ọ bụghị usoro mmezi ihe. N'elu ohere nke ndi mmadu choro n'ime usoro a na-emetuta ha site n'itinye onwe ha ike, mgbe ahu, ha na-agbanye aka n'ile anya n'igosi na oganihu. Izi ezi banyere ihe a na-eme bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa na-eme mgbanwe maka ịkwado usoro ihe ọmụma IT. Ndị na-ahazi mgbe niile na-eme ka ha nwee ike ịkwalite nkà na ụzụ nke IT n'ihi na ha na-anwa mgbalị dị ka ihe ndị ọzọ na-emeghị ka ha na-edozi ya n'ime ihe omume ha kwa ụbọchị. Agbanwe mgbanwe dị mkpa bụ inye ndị mmadụ otu ọnụego ha n'ozuzu ha mere iji zipu usoro IT.
Ọganihu a na-achọ ịnweta gander na ọrụ ndị achọrọ n'ime nzukọ na-agafe ebe dị iche iche na-arụ ọrụ. Ịmara na nkà dị mkpa nyere nzukọ ahụ aka ịchọpụta ọnọdụ ọ dị ugbu a ma debe ọnọdụ ya n'ọdịnihu. Anyị n'ozuzu mara akụkụ dị iche iche nke ọrụ nwere ọtụtụ nkà a chọrọ n'agbanyeghị eziokwu ahụ na n 'ọganihu a, ọ dị oké mkpa itinye uche na nkà atọ dị na atọ. Nke a na-aga n'ihu na-arụ ọrụ akụkụ ụfọdụ, nke na-abụghị otu ihe ahụ dị ka ọrụ ọrụ. Ndị na-ahazi mgbe nile na-ejigide na ọnọdụ ọjọọ mgbe ha na-etinye uche na ọrụ ndị dị ugbu a na ọrụ ndị mmadụ n'ime ọrụ ndị a na-arụ. Ekwesịrị ịkọwa ọdịiche dị iche iche na ọrụ ndị na-arụ ọrụ n'ọdịnihu site n'aka ndị mmadụ n'ozuzu ha na mpaghara ọrụ ndị a. Akụkụ ọrụ nwere ike ịkọwa ịnye ụzọ na-enweghị ike igosi ya ma dị ike maka ndị mmadụ ịkwaga site na otu ọkwa ma banye na nke ọzọ, ma ọ bụ n'akụkụ n'akụkụ, na-agafe agafe n'elu akara ọrụ.
Ozugbo e ji mara ọrụ ndị na-eme n'ọdịnihu, ihe na-esonụ bụ iji nyochaa ikike dị elu nke ndị mmadụ dị na nzukọ ahụ. Buru n'uche: nke a bụ ọganihu ọganihu ọkachamara, ọ bụghị usoro mmezi ihe. Ọ na-enye ndị mmadụ ike ịmata ọdịiche dị iche iche nke nkà ha na-eme ka ha nwee ike ịmalite imeziwanye ọrụ. Ntụle ọrụ nkà dị mkpa kwesịrị itinye aka n'ịghọta njirimara oghere na ọkwa nke onye ọ bụla, n'ime mpaghara arụmọrụ zuru oke na n'ikpeazụ n'ime dum nzukọ IT.
Ugbu a, ndị mmadụ nwere ike ịmeziwanye ma kwadebe atụmatụ ndị edoziziri na nkà ndị dị mkpa achọrọ. Inwe ihe omumu n'ime akwukwo ihe omuma di iche iche nke nyere ndi nkiti aka ichoputa ebe oganihu na mmezi ihe kwesiri itinye aka n'ichebawanye onodu aku na uba iji kwalite mmefu ego. N'ọnọdụ ebe a na-achọrọ nkà ngwa ngwa, nke a na-enyere nzukọ aka ịhọrọ ụdị nkà ọhụụ kwesịrị inweta site n'inweta ma ọ bụ ikwekọrịta nye ndị nwere ndị ahụ nkà.
Nke a bụ mmalite nke usoro nchọpụta maka ịbelata oghere nkà. Dika ndi mmadu naenata uzo ohuru site na n'iru ma na-akwadebe ihe omume, ha nwere ike ichota onwe ha. Dika ngbanwo ahia n'inwe ihe di oke mkpa maka ndi otu, usoro ha ga emewanye n'otu uzo ma gbanye mgbanwe iji megharia usoro ha, uzo, nhazi nhazi, na ihe ndi ozo. N'ihi nke a, nke a chọrọ nrụgide na-aga n'ihu iji nyochaa njirimara isi ọrụ IT. Mgbe otu nzukọ natara ọganihu a na ịpụta usoro nyocha IT, ọtụtụ n'ime ego ahụ ka dị ugbu a.
Ndị òtù IT ga-ekwenye na ha nwere ezigbo nkà na oge zuru oke iji mee ka isi ihe dị mkpa nke azụmahịa ahụ. Ịmepụta usoro ihe ọmụma kọmputa IT na-enye ohere maka òtù IT ka ha kpebie ma hà nwere nnweta site n'ichepụta ebe e nwere ihe ọmụma dị na nkà na iwulite ihe maka ịkọwa oghere ndị a. Dị ka ihe ọhụrụ, ịzụlite usoro nkà na ụzụ IT ga-anọgide na-enye ụfọdụ ihe mkpali maka azụmahịa ahụ ebe ọ na-ejighị ya ga-enyekwa aka ọzọ n'ịgbasa nkà nkà.
Otu esi eme ka ndi oru ngo di nma na-eji oru oru ngo